Riestskọchụkwụ ndị Katọlik Roman Katọlik (RCWP) - WRSP
Mụ nwanyị ndị ụkọchukwu Roman Katọlik (RCWP)
NDAN OMMOM Nwanyị Roman Katọlik (RCWP)
Mbubreyo 1950s – Early 1960s: Otu obere ụmụnwanyị mba ofesi si Switzerland, Austria na Germany rụrụ ọrụ na nsogbu ụmụ nwanyị na Romanka Roman Katọlik.
1963–1965: N’oge nke abụọ Vatican Council nke Roman Catholic Church, ndị German theologians Dr. Ida Raming na Dr. Iris Müller duziri mkpọsa akwụkwọ ozi na ọgbakọ Vatican ma nwee ndị bishọp nwere mmasị na Kansụl maka ijikọ ụmụ nwanyị.
1965–1979: Ọtụtụ ndị ụkọchukwu Katọlik gburugburu ụwa hapụrụ ọkwa nchụ-aja ma lụọ di na nwunye nwere olile anya ịlaghachi dịka ndị ụkọchukwu lụrụ di na nwunye.
1974 (July 29): womenmụ nwanyị iri na otu (ndị akpọrọ "Philadelphia Eleven") bụ ndị e chiri echichi dịka ndị ụkọchukwu na Episcopal Church site n'aka ndị bishọp atọ (mmadụ abụọ lara ezumike nka, otu gbara arụkwaghịm). Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, Episcopal Church kwadoro nhọpụta nke ụmụ nwanyị.
1975 (November 28–30): E nwere nzukọ mba na Detroit, Michigan nke ruru mmadụ 2,000 bịara. E hiwere Nzukọ Ọchịchị Women'smụ nwanyị (WOC) na United States ịkwado maka ịhọpụta ụmụ nwanyị na Chọọchị Roman Katọlik.
1978 (October 16): Kadinal Karol Józef Wojtyła, nke si Poland, ka a hoputara pope nke Roman Catholic Church. Ọ kpọrọ aha ahụ John Paul II.
1979–1992: N’ileghara nsogbu ụmụ nwanyị anya, Vatican lekwasịrị anya na ịlụ ọgụ megide komunizim na ịkwado ndị otu Katọlik na-achọghị mgbanwe.
1994 (May 22): Pope John Paul II nyere Ordinatio sacerdotalis, akwụkwọ ozi ndịozi na-ekwu na "theka enweghị ikike iji nye ụmụ nwanyị nchụaja nke ndị nchụaja," na echiche a "ga-abụ nke ndị okwukwe niile nke Chọọchị ga-ejide n'aka," na na e mechiri okwu banyere ichi ụmụ nwanyị maka mkparịta ụka.
1995: Mkparị a metọrọ n'ụzọ mmekọahụ na Austria nke gbasara Kadịnal Hans Hermann Groer kpasuru ndị otu mgbagha ụka ahụ, "Anyị bụ ndị ụka" (Wir sind Kirche), n'Austria, Germany na South Tyrol. Movementtù ahụ gụnyere ịchụso nhọpụta ụmụ nwanyị.
1996: Anyị bụ Chọọchị ghọrọ nzukọ mba ụwa.
1996 (July): Iwu ndi nwanyi n’uwa dum (WOW) hiwere na Synod nke ndi nwanyi mbu nke Europe na Gmunden, Austria.
1999: priestkọchukwu Roman Katọlik James Callen na ọkà mmụta okpukpe Mary Ramerman, bụ ndị hapụrụ ụka diọces ha Corpus Christi na Rochester, New York, hiwere otu parish na-abụghị canonical ha kpọrọ Spiritus Christi na Rochester. Vatican chụpụrụ ha n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị.
2001 (November 18): Mary Ramerman bụ onye Bishọp Peter Hickman nke Old Catholic Church na Rochester, New York, họpụtara onye ụkọchukwu Katọlik.
2002 (Machị 24): womenmụ nwanyị isii, ndị niile si Austria na Germany, bụ ndị e chiri echichi dikọn na Pettenbach, Austria.
2002 (June 29): womenmụ nwanyị abụọ ọzọ bụ ndị e chiri echichi ịbụ ndị dikọn, na mmadụ asaa n'ime ndị deacon asatọ (ndị a maara dị ka The Danube Seven) wee họpụta dịka ndị ụkọchukwu Roman Katọlik n'ụgbọ mmiri na Osimiri Danube.
2002 (August 5): Kadịnal Joseph Ratzinger, onye isi ọgbakọ Congregation of the Doctrine of the Faith na Vatican, chụpụrụ Danube Seven. Mgbe ọ nwara ịgba akwụkwọ, Ratzinger dechara iwu ahụ na Disemba 21, 2002. E nyefere Christine Mayr-Lumetzberger na Gisela Forster akwụkwọ ikpeazụ na Jenụwarị 2003.
2002 (October 20): Christine Mayr-Lumetzberger na Gisela Forster bụ ndị bishọp e doro nsọ na Pettenbach, Austria.
2003 (August 7): Nwanyị nwanyị South Africa Dominican nwanyị Patricia Fresen bụ onye ụkọchukwu na Barcelona, ​​Spain.
2004 (June 26): Womenmụ nwanyị abụọ bụ ndị America, Victoria Rue na Jane Via, yana ụmụ nwanyị anọ ndị Europe, bụ ndị e chiri echichi dikọn na Osimiri Danube.
2005 (Jenụwarị 2): Patricia Fresen nke South Africa ghọrọ onye ụkọchukwu nwanyị na-asụ Bekee nke mbụ ka edoro bishọp nsọ na mmegharị ndị ụkọchukwu Roman Katọlik. Ọ bụ bishọp lekọtara ya nke mere ka o doo ya ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu echichi na North America.
2005 (Eprel 19): Kadịnal Joseph Aloisius Ratzinger nke Germany ka a hoputara ịbụ pope nke Romanka Roman Katọlik wee were aha Benedict XVI.
2006 (Jenụwarị 7): Ndị Roman Katọlik Womenmụ nwanyị Ndị Katọlik – USA, Inc. ghọrọ ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ.
2006 (June 24): womenmụ nwanyị atọ sitere na US (ndị ụkọchukwu abụọ, otu diacon) ka enyere iwu na Lake Constance n'akụkụ ụsọ mmiri Switzerland.
2006 (Julaị 31): Echiri ụmụ nwanyị US anọ ka ndị dikọn wee chie ụmụ nwanyị asatọ ndị Amerịka ụkọchukwu n'ụgbọ mmiri dịdebere Pittsburgh, Pennsylvania, nhazi izizi na mmiri US.
2006 (October 22): E chiri Judith McKloskey diacon na Minneapolis, Minnesota na ụka ụka Roman Katọlik na Minneapolis na nke mbụ (na ikekwe) nke nwanyị na ụka ụka Roman Katọlik.
2007 (February 3): RCWP-USA Constitution ka akwadoro, mepụta ọtụtụ mpaghara, iji kwanyere ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-eme nhọpụta na ndị ụkọchukwu ahọpụtara. Ekwesịrị iduzi mpaghara nke ọ bụla bishọp nke ya.
2007 (July 14): Echiri ụmụ nwanyị US abụọ ndị nchụaja na ụmụ nwanyị US abụọ ịbụ ndị dikọn a họpụtara na New York City, New York. Nke a bụ nke mbụ a na-ahọpụta ụmụ nwanyị na United States na ala.
2007 (July 22): Otu nwanyị US ka edere oku na otu diacon na La Casa de Maria Retreat Center, Immaculate Heart Community nke ozi Los Angeles, na Santa Barbara, California. Nke a bụ ọrụ nhọpụta ọhaneze izizi na United States nwere na ala nke otu ụlọ ọrụ Katọlik akụkọ ihe mere eme nwere.
2007 (November 11): Ree Hudson na Elsie McGrath bụ ụmụ nwanyị mbụ a họpụtara ịbụ ndị ụkọchukwu n'ụlọ nzukọ dị na St. Louis, Missouri na nke mbụ (ya na Bishop Patricia Fresen, onye rụrụ ọrụ na ntinye aka) ka enyere ha akwụkwọ nchụpụ na saịtị mmebe.
2008 (Eprel 9): Sibyl Dana Reynolds ka edoro bishọp nwanyị nwanyị US mbụ na Stuttgart, Germany. Reynolds jere ozi dị ka bishọp nke United States dum ruo Eprel 2009.
2010 (October 21): Mpaghara mbụ nke Southern Region kewara site na RCWP-USA ma guzobe Association nke Ndị ụkọchukwu Womenmụ nwanyị Roman Katọlik (ARCWP). Ejikọtara ya dị ka nzukọ anaghị akwụ ụgwọ dị iche iche na United States.
2009–2019: E chiri ụmụ nwanyị echichi na gburugburu ụwa gụnyere Canada, South America, Philippines, na South Africa.
2013 (Machị 13): Mgbe ezumike nká nke Pope Benedict XVI, Kadịnal Jorge Mario Bergoglio, a họpụtara SJ nke Argentina pope nke Romanka Roman Katọlik wee were aha Francis.
2020 (February 1): Kori Pacyniak, onye izizi, amaara ama, na-abụghị onye ọnụọgụ abụọ, ka e chiri onye ụkọchukwu na San Diego, California.
2020: Site na 2002 rue 2020, ụmụ nwanyị 235 ka a họpụtara: ndị nchụnta 203 (iri na isii nwụrụ ugbu a); bishọp iri na itoolu; ndị dikọn iri na itoolu na-akwadebe maka ichi ndị nchụ-aja; na mmadụ iri na asatọ na-akwado ime echichi nye diaconate.
Ụgha / MGBỌ MGBỌ
Ndị otu ụmụ nwanyị Roman Katọlik bụ ndị ụkọchukwu (RCWP) enweghị onye chipụtara ha. Ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ na Europe na, mgbe nke ahụ gasịrị, na United States sonyeere ọmụmụ nke mmegharị ahụ. (Otutu akuko akuko banyere ebe a sitere na Mayr-Lumetzberger 2018 na 2019. Lee kwa ndi Roman Catholic Women P oku Nd: “History.”)
Na ngwụsị afọ ndị 1950 na mmalite 1960s, ụmụ nwanyị Katọlik nọ na Europe malitere ịrụ ọrụ n'okwu ụmụ nwanyị na Chọọchị Roman Katọlik, [Foto dị n'aka nri] n'agbanyeghị na nhọpụta nke ịhọpụta ụmụ nwanyị amalitelarị na mmalite narị afọ nke iri abụọ na United States n'oge ụmụ nwanyị na-enwe ntuli aka. ije (Cordero na Thiel 2014). N'ime ụmụ nwanyị a bụ Gertrud Heinzelmann nke Switzerland, na Gertrud May na Theresa Muench nke Germany. Mgbe Pope John XXIII (peeji nke 1958–1963) kpọrọ ọgbakọ Vatican nke Ecumenical nke Abụọ, nke bidoro n’afọ 1963, mbọ ụmụnwanyị gbasawanyere. Ndị ọkà mmụta okpukpe Dr. Ida Raming na Dr. Iris Müller duziri mkpọsa akwụkwọ ozi na ngalaba dị iche iche nke Vatican na-akwado ịkwado ụmụnwaanyị. Ha gbasikwara ndị bishọp ike na-aga kansụl. Na mmechi ọgbakọ kansụl ahụ, enwere ezigbo olile-anya ma dị ka ihe ziri ezi na popu ga-akwado ndị ụkọchukwu lụrụ nwanyị na ndị dikọn nwanyị. (Ndi dikon na ndi nchu aja chiri ha site na ndi bishop)
Ka ọ na-erule etiti afọ ndị 1970s, òtù ụmụ nwanyị nke North America kpalitere òtù ụmụ nwanyị na Chọọchị Roman Katọlik dị na United States. Echichi nke ụmụ nwanyị iri na otu na-enyeghị ikike ịbụ ndị ụkọchukwu na 1974 site n'aka ndị bishọp atọ nọ na Episcopal Church, ngalaba America nke Anglican Communion, ghọrọ ihe atụ dị mma maka ịhọpụta ụmụ nwanyị na Chọọchị Roman Katọlik. Nzukọ mba gbasara ụmụ nwanyị nọ na ụka Katọlik, nke ihe ruru mmadụ 2,000 bịara, mere na Detroit, Michigan, Nọvemba 28–30, 1975. Nzukọ ahụ hụrụ ka e hiwere Nzukọ Ọchịchị Women'smụ nwanyị (WOC) na United States ịkwado maka echichi ụmụ nwanyị na Roman Catholic Church (Women's Ordination Conference nd). Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị otu na / ma ọ bụ ndị isi nke WOC kemgbe ọtụtụ afọ so na ụmụ nwanyị Roman Katọlik bụ ndị e mechara họpụta na 2000s.
Ka ọ dị ugbu a, na Europe, Pope John Paul II (p. 1978–2005) gbanwere mmasị Vatican ịlụ ọgụ megide komunizim. Ọ chọrọ iguzobe ọchịchị onye kwuo uche ya nke Chọọchị na-emetụta; kwadoro òtù Katọlik na-achọghị mgbanwe n'ụwa niile; ma tinye ego na mmegharị nnwere onwe Polish. N'ịbụ onye na-enweghị mmasị na nsogbu ịkwa iko nke ndị ụkọchukwu na Chọọchị Katọlik, ọ kpọrọ asị megide nsogbu ụmụ nwanyị. Dị ka ihe atụ, n’afọ 1994, popu nyere iwu Ordinatio sacerdotalis (On Reserving Priestly Ordination to Men Alone), nke ndị popu kwupụtara na-ekwu na “Chọọchị enweghị ikike ọ bụla inye ụmụ nwanyị nhọpụta nke ụkọchukwu.” Akwụkwọ ahụ gara n'ihu kwuo na echiche a bụ "ndị okwukwe niile nke Churchka ga-ejide ya," yabụ machibidoro mkparịta ụka ọ bụla gbasara ịhọpụta ụmụ nwanyị (John Paul II 1994).
Na Synod nke Ndi Nwanyi mbu nke Europe, nke emere na Gmunden, Austria na 1996, e guzobere Ormụ nwanyị na-achị ụwa nile (WOW) ịchụso ụmụ nwanyị na Roman Catholic Church (Women Ordination Worldwide nd). Christine Mayr-Lumetzberger, onye Ọstrịa, na Dr. Ida Raming, onye Jamanị, ghọrọ ndị otu hiwere Orchụ Women'smụ nwanyị n’uwa nile. WOW kpọkọtara ndị mmadụ n'otu n'otu na òtù mba dị iche iche otu nzube. Na Synod nke Ndị Nwanyi Europe nke Mbụ, Mayr-Lumetzberger na Raming zutere ndị na-akwado maka ịhọpụta ụmụ nwanyị si n'ọtụtụ mba Europe, England, na United States. N'ihi ogbako a, Mayr-Lumetzberger kwetara idepụta mmemme ịkwado ụmụ nwanyị maka ichi ha. WOW bidokwara inye ụmụ nwanyị ebe a na -akụkọ maka inyocha ya ma were usoro echichi. Groupsmụ nwanyị atọ dị na Austria, nke Mayr-Lumetzberger duziri, bidoro ịkwado maka echichi.
Na United States, Orkpụrụ Women'skpụrụ Women'smụ nwanyị gara n'ihu na-akwado ya. Otu otu WOC agbasoro n'obodo dị iche iche na mba ahụ. Na 1998, otu nwanyị nwanyị Roman Katọlik nwanyị na onye ọkà mmụta okpukpe, Mary Ramerman, na ụkọchukwu Roman Katọlik Jim Callan hapụrụ ụka Katọlik Roman Katọlik na Rochester, New York. Callen kwadoro nhọpụta nke ụmụ nwanyị ma kwe ka Ramerman nọrọ na ebe ịchụ aja ma nye aka na Mass n'oge ịdobe achịcha na mmanya e ji mee Eucharist site na ijide arịa dị nsọ. Mgbe bishọp obodo ya nyere Callen iwu ka ọ kwụsị ma kwụsị, Callen na Ramerman hapụrụ parish ahụ wee hibe Spiritus Christi, ndị otu Katọlik nweere onwe ha, na 1999. Vatican chụpụrụ Ramerman na Callan obere oge ka nke ahụ gasịrị (Newman 2019). Nkwado Callen maka nhọpụta ụmụ nwanyị na Spiritus Christi ghọrọ nke a bịara mara gburugburu ụwa ọdịda anyanwụ Roman Katọlik. Na Nọvemba 2001, Peter Hickman, bishọp nke Old Catholic Church họpụtara Ramerman ụkọchukwu n'ihu otu puku mmadụ 3,000 na Rochester, New York, ndị gara n'agbanyeghị na ndị bishọp nọ n'ógbè ahụ na-achọ ịchụpụ ha (Bonavoglia 2001).
Ka ọ dị ugbu a, na Europe, ọtụtụ ụmụ nwanyị amalitela ịhazi maka ịhọpụta otu ụmụ nwanyị dị ka ndị ụkọchukwu n'ụgbọ mmiri na Osimiri Danube na mbido afọ 1998. [Foto dị n'aka nri] A họọrọ Osimiri Danube ebe ọ bụ na e weere ya dị ka mba ụwa mmiri dị n’agbata Germany na Austria na ọ bụghị akụkụ nke dayọsis bishọp Roman Katọlik ọ bụla. Na 2002, Mayr-Lumetzberger zipụrụ akwụkwọ akụkọ na-ekwupụta ihe omume a tupu ụmụ nwanyị ahụ achọta bishọp ichi ha, “tụkwasikwu obi ike na Chineke ga-eweta.” N'ụzọ ụfọdụ n'ụzọ ọrụ ebube, n'echiche ha, Dr. Gisela Forster, nwanyị nọ na mmemme nkwadebe echichi, natara oku ekwentị nwunye bishọp Argentine lara ezumike nká Rómulo Antonio Braschi na-egosi na ọ ga-echichi ha. Onye ụkọchukwu Roman Katọlik chiri echichi, ọchịchị aka ike nke Argentina n'oge ahụ manyere Braschi ịgbaga Germany, dị ka ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndị ọzọ mere. Otú ọ dị, na Germany, ọ lụrụ nwunye ya bụ Alicia. Braschi ka onye bishọp echichi na Munich site n’aka Roberto Garrido Padin, onye Roman Roman Katọlik e chiri echichi na bishọp nke Apostka Apostolic Catholic nke Brazil, na Hilarios Karl-Heinz Ungerer, bishọp nke Catholicka Katọlik Free na Germany; Braschi n’onwe ya kwuru na e chiri ya echichi bishọp nke ugboro abụọ n’ihi na nke mbụ weere na ọ nweghị isi. Tupu echichi 2002 Danube, Braschi doro onye mọnk mbụ Benedictine nsọ ma chie ụkọchukwu Roman Katọlik, Rafael (Ferdinand) Regelsberger, ka ọ bụrụ bishọp Roman Katọlik.
Braschi na Regelsberger chiri ụmụ nwanyị isii si Austria na Germany chie na nzuzo dọọsị na Palm Sunday, Machị 24, 2002. (Nchịkwaa dị ka dikọn bụ ihe mbụ a na-eme tupu nata ọkwa dị ka okenye / ụkọchukwu na Churchka.) N'ihi nrụgide Vatican na ndị bishọp ya, echichi ndị mmadụ (nke mechara mara dị ka “echichi catacomb”) dị mkpa n’oge ahụ.
Edebere nhọpụta ndị ụkọchukwu na Osimiri Danube na June 29, 2002. Otu bishọp Katọlik a na-amaghị aha ya, nke a maara dị ka Bishop X, gara Passau, Germany maka emume. Dị ka akụkọ a na-akwadoghị si kwuo, ọ kwụsịrị n'ụzọ n'ụzọ obibi ndị mọnk iji rahụ. N’ụzọ ụfọdụ, ndị mọnk ahụ matara ihe mere njem ya ji wee kpọchie ya n’ụlọ ya ka ọ ghara ịga. N'ihi ya, ọ bụ ndị Bishọp Braschi na Regelsberger họpụtara ndị dikọn abụọ ọzọ, wee bido asaa n'ime ụmụ nwanyị asatọ dị ka ndị ụkọchukwu na Osimiri Danube na-eso usoro Roman Katọlik. Womenmụ nwanyị ndị e chiri echichi dịka ndị ụkọchukwu bụ: Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner, na Angela White (aha a na-akpọ Dagmar Celeste, nwanyị a mụrụ si Austria nke lụrụ nwa amaala US ghọrọ nwa amaala US).
Na July 10, 2002, ụmụ nwanyị niile e chiri echichi na Danube, ewezuga "Angela White," natara ịdọ aka na ntị ("Monitum") n'aka Kadịnal Joseph Ratzinger prefect nke Congregation of the Doctrine of the Faith na Vatican, egwu iwepụ; ka ọnwa nke asatọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asatọ n’afọ 5, ụmụ nwanyị asaa niile ka akpọrọ aha na mkpebi ịchụpụ (“Decree of Excommunication” 2002). Iwu chụpụrụ ndị ọzọ kwupụtakwara, sị: “Iji mee ka a kwụsị inwe obi abụọ ọ bụla gbasara ọnọdụ onye so na Bishọp Romulo Antonio Braschi, onye nwara inye ụkọchukwu ndị nwanyị ọtụtụ ndị Katọlik, ,tù maka Doctrine of the Faith na-egosi na, dị ka schismatic, ọ abụrụla nke a chụrụ n'ọgbakọ Ndịozi. ” N’agbanyeghi nkwuputa okwu ya, ozigbo ozi banyere ichi Danube asaa ruru ndi nwanyi na United States, ufodu bidoro iju ajuju banyere omume echichi.
Na October 20, 2002, Christine Mayr-Lumetzberger na Gisela Forster bụ ndị bishọp e doro nsọ na emume catacomb, n'obere ụlọ ụka nke onwe, na Pettenbach, Austria, nke Bishọp Rafael Regelsberger na bishọp ọzọ amabeghị onye ha bụ. N'ihi na enwere ajụjụ gbasara emume echichi ha, Mayr-Lumetzberger na Forster bụzị ndị bishọp e doro nsọ sub ọnọdụ (ọ bụrụ na, ọ bụrụ na nhọpụta nke mbụ ha abaghị uru) na Seibersdorf, nke dị na Vienna, na Mee 19, 2003 site n'aka onye bishọp Roman Katọlik mara na òtù RCWP dị ka Bishop X na Bishop Regelsberger.
Na August 7, 2003, e chiri Sista na ọkà mmụta okpukpe South Africa Dominican, Patricia Fresen, [Image na nri] oku ka ọ bụrụ onye ụkọchukwu na Barcelona, ​​Spain. Fresen abụrụwo prọfesọ mahadum na prọfesọ seminarị. N’afọ 2004, ụmụ nwanyị abụọ amụrụ n’obodo US, Victoria Rue na Jane Via (aka Jillian Farley) bụ ndị e chiri dikọn n’osimiri Danube, tinyere ụmụ nwanyị si France, Latvia / Germany, Austria, Switzerland, na Canada: Genevieve Beney (France) , Astrid Indricane (Latvia / Germany), Monika Wyss (Switzerland), na Michele Birch-Conery (Canada). Birch-Conery mechara hapụ obodo RCWP ka ọ sonyere Association nke ndị ụkọchukwu Roman Katọlik Roman, nke kewapụrụ onwe ya na RCWP na Ọktọba 21, 2010. E mechara họpụta Birch-Conery bishọp na njem ahụ.
Na 2004, Bishop X zutere na nzuzo Patricia Fresen, onye South Africa (na mgbe ahụ, onye bụbu onye Dominican Sista) onye na-asụ Bekee. Dabere na Fresen, Bishop X gwara ya, "ọdịnihu nke otu a agaghị adị na Europe. Ọ ga-abụ na America. Ya mere, achọrọ bishọp na-asụ Bekee ”(Fresen 2019). Ọ gwara Fresen ka e chie ya bishọp ka o nwee ike ichi ụmụ nwanyị ụkọchukwu na United States. Fresen chetara okwu ya:
[Y] ị gaghị enweta ihe ọ bụla site na ịbụ bishọp: ị gaghị enweta diocese, ma ọ bụ ụlọ bishọp, ma ọ bụ ụgbọ ala, ma ọ bụ ụgwọ ọnwa bishọp. . . . A ga m enyefe gị n’aka m nke ndịozi ma, na-eguzo n’ahịrị nke inwe ndịozi, ị ga-ahọpụta ndị mmadụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, isi ọrụ gị ga-abụ ilekọta ndị ụkọchukwu ịhọpụtara. . . ruo mgbe ịchọtara ndị mmadụ iweghara ọrụ nke bishọp site n'aka gị (Fresen 2019).
Bishọp X gosipụtara na ntinye Fresen ka bishọp abụghị maka ya mana maka ụmụ nwanyị ọ ga-echi. Fresen kwenyere ma dokwa ya bishọp na Jenụwarị 2, 2005 iji nyere ụmụ nwanyị echichi na North America aka.
Na 2005, e chiri ọtụtụ ụmụ nwanyị North America ugwu na St. Lawrence Seaway dị nso na Ganonoque, Canada na-esochi ọgbakọ emere na Women in the Church na Ottawa, Canada. A họpụtara Victoria Rue ụkọchukwu n'oge ahụ, ya na ụmụ nwanyị ndị ọzọ chiri echichi dị ka ndị ụkọchukwu na ndị dikọn. Na 2005, Rue na Phillip Faker hiwere otu nzukọ ha kpọrọ Roman Catholic Womenp priest – USA ma tinye akwụkwọ maka ọnọdụ anaghị akwụ ụgwọ. Faker zutere Rue na nhazi diaconate na 2004 na Danube bụ nke a họpụtara Rue na nwunye Faker, Jane Via, ndị dikọn. Na 2006, ndi Katoliki ndi nwanyi Roman Catholic – USA, Inc. anabatara oru nno ndi ozo.
Ka ọnwa nke iri abụọ na anọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na isii n’afọ 24, nwa amaala mba Amerịka aha ya bụ Regina Nicolosi, Jane Via (US), na Monika Wyss (Switzerland), bụ ndị e chiri echichi ịbụ ndị ụkọchukwu na Bodensee (nke a maara dị ka Lake Constance na ndị na-asụ Bekee) ebe Bodensee jikọtara ya na Osimiri Rhine. na etiti Europe na njedebe Switzerland. N'otu usoro emume a, e chiri Andrea Johnson, onye bụbu onye isi ala WOC, dikọn. Na July 2006, 31, echiri ọtụtụ ụmụ nwanyị na United States Osimiri Monongahela, n'akụkụ ụsọ mmiri Pittsburgh, Pennsylvania. Eileen McCafferty DiFranco, (Merlene) Olivia Doko, Joan Clark Houk, Kathleen Strack Kunster, Bridget Mary Meehan, Roberta Meehan, Sibyl Dana Reynolds, na Kathy Sullivan Vandenberg bụ ndị e chiri ndị ụkọchukwu, ebe Cheryl Bristol, Juanita Cordero, Mary Ellen Robertson, na Janice Sevre-Duszynska bụ ndị e chiri dikọn. [Foto dị n'aka nri]
Ka ọ na-erule 2007, ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ na United States na-achọ ka a họpụta ha dị ka ndị nchụàjà. Ihe a choro n'aka ndi bishop ndi nwanyi nke Europe (tinyere Patricia Fresen, onye South Africa nke bi na Germany) ichoro umunwanyi US di otutu nke na odi mkpa bishop na United States putara ihe. Na Eprel 9, 2008, Sibyl Dana Reynolds ka e chiri echichi na Stuttgart, Germany dịka nwanyị mbụ Roman Katọlik bishọp nke United States. Reynolds weghaara ọrụ ịhọpụta ụmụ nwanyị na mba niile. Ka ọ dị ụgbụ a, otu ụmụ nwanyị bidoro ịhọpụta Michele Birch-Conery na Canada na 2005. Marie Bouclin ghọrọ nwanyị mbụ bishọp Canada na 2011. E hibere nzukọ ndị ụkọchukwu Roman Katọlik - Canada na 2014.
A họpụtara ndị bishọp ndị nwanyị ọzọ na 2009 iji nyere aka maka mkpa ụmụ amaala ụmụ nwanyị na-achọ nchikota na United States. E chiri Andrea Johnson nwanyị bishọp mbụ nke mpaghara Ọwụwa Anyanwụ; Regina Nicolosi, nwanyị mbụ bishọp nke Mid-Western Region; Joan Houk, bishọp mbụ nke Mpaghara Great Waters; na Bridget Mary Meehan, bishọp mbụ nke Mpaghara Ndịda mgbe ahụ. Reynolds ghọrọ bishọp nke Western Region ruo mgbe Olivia Doko nọchiri ya. Nancy Meyer nọchiri Nicolosi. Doko nọchiri anya Suzanne Thiel na Jane Via [Foto dị n'aka nri] bụ ndị a họpụtara ka ha bụrụ ndị bishọp ga-eje ozi maka mkpa ala niile nke Western Region nke United States, gụnyere Alaska na Hawaii. N'ime usoro RCWP, ndị bishọp ụmụ nwanyị nwere ike ịla ezumike nká mgbe ha dị njikere ịme nke a, mmezi mmeghari ohuru na omume Roman Katọlik.
N'agbata afọ 2004 na 2008, naanị ụmụ nwoke abụọ Roman Katọlik chiri echichi na United States kwadoro ọkwa ụmụ nwanyị n'ihu ọha, Rod Stephens na Roy Bourgeois. Dị ka ụkọchukwu Roman Katọlik Jim Callan, na ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu, a chụpụrụ ha maka "mmehie dị oke njọ" nke isonye na nchụso nwanyị.
N'ime ọtụtụ ihe ịrịba ama mere na akụkọ ihe mere eme nke RCWP, nhọpụta ụmụ nwanyị abụọ dịka ndị ụkọchukwu na St. Louis, Missouri na 2007 bụ ihe ama ama. Ebe narị mmadụ isii bịara, otu nwanyị rabaị nabatara emume a n'ụlọ nzukọ ha. N'agbanyeghị nrụgide sitere na Achịbishọp Roman Katọlik mgbe ahụ bụ Raymond Burke, onye ọbịa Rabbi Susan Talve bịara nnọkọ ahụ ma kwuo adreesị nnabata. Ozugbo echichichara ụmụ nwanyị abụọ a, Vatican chụpụrụ ha, yana Bishọp Patricia Fresen, onye mere ntụpọ aka. Nke a bụ nke izizi a chụrụ mmadụ na ebe e chiri ya eze. E mechara chụpụ ọtụtụ ndị bịaranụ. Na Julaị 22, 2007, echiri otu nwanyị US ka ọ bụrụ ụkọchukwu na otu diacon na La Casa de Maria Retreat Center, otu Obi N'obodo nke ozi Los Angeles, na Santa Barbara, mpaghara California. Nke a bụ ọrụ nhọpụta ọhaneze izizi na United States nwere nke nwere ebe ewumewu Roman Katọlik nwere.
N'ọnwa Ọktọba 2010, Bishọp Bridget Mary Meehan na ụmụnwaanyị nke mpaghara ndịda ya kewapụrụ onwe ha na RCWP wee hiwe Association of Roman Catholic Women P oku (ARCWP) (lee Association of Roman Catholic Women P priest nd). Meehan na-akọwa ARCWP dị ka mmiri dị iche n'ime usoro ahụ.
Ozizi na nkwenkwe
Ndị ụkọchukwu Roman Katọlik gbasiri mbọ ike ịmaliteghachi ozi ndị ụkọchukwu na Churchka Roman Katọlik ọhụrụ. Nkwado bụ isi nke RCWP bụ ịhọpụta ụmụ nwanyị, ọ bụ ezie na mmegharị ahụ na-ahọpụta ụfọdụ ụmụ nwoke yana ndị LGBTQ. Site na ịhọpụta ụmụ nwanyị dịka Rite nke Chọọchị Roman Katọlik, ndị RCWP nwere olile anya ị ga-e modelomi Catholicka Roman Katọlik nke ọdịnihu ma meghee obi na uche nke ime Roman Katọlik nye ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu. Ndị RCWP na-edukwa obodo dị iche iche maka ndị Roman Katọlik na-aga n'ihu bụ ndị dịla njikere ogologo oge maka ịhọpụta ụmụ nwanyị ma nwee nkụda mmụọ na Chọọchị canonical. Dị ka ozi RCWP si kwuo:
Ndị Roman Katọlik Katọlik-USA, Inc. (RCWP-USA) bụ nzukọ amụma n'ime nzukọ na-aga n'ihu na mba Roman Katọlik. Ebumnuche ya bụ ịkwadebe, dozie na nnọchibido ndịozi, ma kwado ndị inyom bụ ndị Mmụọ Nsọ na obodo ha kpọrọ maka ọrụ ọhụụ nke ndị ụkọchukwu gbanyere mkpọrọgwụ na ikpe ziri ezi na ikwesị ntụkwasị obi nye Oziọma ahụ (RCWP Constitution 2007: 1).
Priestsmụ nwanyị ndị Roman Katọlik ndị ụkọchukwu kwenyere na ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwoke na nwanyị bụ Chineke hà nhata, ha nwekwara ike ịnọchite anya Kraịst n'ozi. Ozi a sitere na nkwenkwe na baptism nkịtị na oku nke Mmụọ Nsọ ịgbaso Jizọs dịka ihe nlereanya maka inye ikike, itinye aka, mmesapụ aka na ije ozi. Priestsmụ nwanyị Roman Katọlik ndị ụkọchukwu na-anwa ịgbaso mmụọ na nkuzi nke Second Vatican Council site na-eme usoro mmụta okpukpe ọhụrụ, liturgy, na pastoral. Nke a pụtara na ha na-anwa ịrụ ọrụ na ụkpụrụ nke enyemaka (ya bụ, na-arụ ọrụ na ọkwa kachasị nke nchịkwa) na ọchịchị onye kwuo uche ya. Priestsmụ nwanyị ndị ụkọchukwu na ndị na-akwado ha ahụghị njikọ dị n'etiti alụghị nwanyị na ọkwa nchụ aja. A na-eche na a na-akpọ ha ka ha gbaa ma kwado ọgbọ ọzọ nke ụmụ nwanyị na ndị nwoke na nwanyị niile na ịchụso ụkọchukwu Roman Katọlik (RCWP Constitution 2007).
Nchịkọta RCWP na-abụghị akwụkwọ iwu na-amalite ma mechie n'ekpere. Ha na-ejikarị ịgụ Akwụkwọ Nsọ, mkparịta ụka bara uru, ma ọ bụ abụ a na-emeghe mgbe oge ịgbachi nkịtị na-emeghe.
Communitiesfọdụ obodo kpeela ekpere ọdịnala Roman Katọlik n'asụsụ gụnyere / nke oge a, dịka Ekpere Onyenwe Anyị (Ekpere Jizọs), Ekele Mary, Rosary, Memorare (ekpere nye Virgin Mary), wdg. Otu a na-adaberekwa n'ekpere nke ndị edemede oge a. N'okpuru ebe a bụ nsụgharị nke Ekpere nke Jizọs nke a na-eme na Mary Magdalene Apostle Catholic Community na San Diego, California.
N'ịhụnanya Chineke, onye n'eluigwe dị,
Ka aha gi di ebube n’ebe niile.
Ka Kin-dom bia.
Mee ka obi Gi choo uwa,
N'ime anyị, site na anyị ma site n'aka anyị.
Nye anyi nri kwa ubochi.
Gbaghara anyị. Na-enyere anyị aka ịgbaghara ndị ọzọ.
Mee ka anyị ghara inwe nchekasị na ụjọ niile.
N'ihi na Gi n'achọ n'ike nke sitere n'ịhụnanya,
nke bụ ebube gị,
Ebighebi ruo ebighebi. Amen (Onye edemede amaghị)
Ndị Roman Katọlik Katọlik-USA, Inc. bụ nzukọ afọ ofufo kpamkpam dabere na mmesapụ aka nke ndị na-akwado ya maka ego. RCWP-USA, Inc. bụ nzukọ anaghị akwụ ụgwọ, nke chọrọ ndị isi oche n'okpuru iwu anaghị akwụ ụgwọ. Ọrụ dị na bọọdụ ahụ mepere onye ọ bụla a họpụtara RCWP-USA, Inc. so na, ọkachasị ọnọdụ, ndị na-akwadoghị RCWP na-akwado ụdị nwoke ọ bụla. Ndị Bishọp nwere onye nnọchi anya na-anaghị atụ vootu na bọọdụ ndị ndị bishọp họpụtara. Ndị bishọp RCWP bụ ndị pastọ (ndị ụkọchukwu) na obodo ha dị ka ndị pastọ karịa ndị nchịkwa.
Na ọkwa mba, a na-agwa ndị ọrụ ọrụ site na ọtụtụ mmemme na ndị isi ndu dịka Mmemme Nkwadebe Mmemme; Ọhụụ Ọhụụ; Bishọp Circle, ya na ndị a na-enye ndụmọdụ dịka Circle Circle (ndị nwere nka na nghọtahie na nhazi esemokwu); Ego Ego Development Fund (ndi nwere nka na nkpata ego na inye onyinye); Media Circle (ndi mara ihe ede ederede, ikwu okwu ndi mmadu, na mmekorita mgbasa ozi ndi ozo); a National Gathering Circle (ndị dị njikere ịhazi ma mezuo ezumike obodo, nzukọ, na nzukọ); na Mgbasa Ozi na Mgbasa Ozi webụsaịtị (ndị nwere nka na njikwa webụsaịtị, mgbasa ozi, nkwalite na mgbasa ozi).
E kewara ndị Roman Katọlik Katọlik-USA, Inc. na mpaghara mpaghara nnukwu ala na United States: Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ, Mpaghara Mid-West, Mpaghara Nnukwu Mmiri, [Foto dị n'aka nri] na Western Region. Womenmụ nwanyị si na ndịda ndịda sonyere RCWP gụnyere otu n'ime mpaghara ndị a. Ọrụ ndị isi na mpaghara ọ bụla gụnyere onye nchịkwa, onye nduzi nke mmemme nkwadebe, onye isi ego, onye nnọchi anya nke ndị isi oche mba, onye nnọchi anya nke ndị na-ahụ maka ọhụụ mba, yana bishọp ma ọ bụ ndị bishọp mpaghara. A na-ahọpụta ndị ndu niile.
Otu Onye ndu (nke gụnyere onye nchịkwa ma ọ bụ ndị nchịkwa, nke nnọchi anya mpaghara nke ndị na-ahụ maka ọhụụ nke mba, bishọp mpaghara, onye nnọchi anya mpaghara nke ndị isi ala, onye nhazi ihe omume mpaghara, na onye ọrụ ego mpaghara) ) na-ezukọ kwa ọnwa iji mee mkpebi azụmahịa maka mpaghara ahụ na ndị nwere mmasị, ndị sonyere na mpaghara ahụ. E kewara ụfọdụ mpaghara n'ime ụyọkọ ala ala. Cyọkọ nke ọ bụla na-ahọpụta onye nnọchi anya na nzukọ kwa ọnwa nke ndị nnọchi ụyọkọ na onye nchịkwa na bishọp / s. Ndị okirikiri ndị ọzọ, dịka mpaghara Obi ọmịiko mpaghara, sonye na ndụ mpaghara ahụ. Mpaghara ọ bụla na-achịkọta opekata mpe otu afọ kwa afọ maka oge ọnụ, ịlaghachi ma ọ bụ agụmakwụkwọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ekpere, liturgy, na azụmaahịa dị mkpa.
Priestsmụ nwanyị ndị Katọlik Roman ndị ụkọchukwu nọ na Roman Catholic Womenp oku-USA, Inc. si na United States na-ezukọ kwa afọ atọ na mgbakọ mba.
RCWP-USA, Inc. weputara aha ya na okwu German maka "nwanyipriest" (priesterin) nke ejiri mee ihe na mbido Europe. Agbanyeghị na ngagharị ahụ sitere na Europe wee mee ka ngagharị a na US, Canada, na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, njem ahụ etoghị na Europe. Nke a bụ n'ihi enweghị nkewa nke ụka na steeti ebe ahụ. Womenmụ nwanyị ndị e chiri echichi na Europe enweghị ike ịme ihe ụmụ nwanyị nọ n'America nwere ike ịme (dịka ịgbazite ohere n'ụlọ ụka ụka Protestant maka ọrụ). Ha nwere ike ịnye ha ozi nke sacrament (dika baptism na agbamakwụkwọ) mana o siri ike ichikota ndi mmadu na-efe ofufe. Nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara Bishop X ji gwa Patricia Fresen na ọdịnihu nke usoro a bụ na United States (na Canada). N’ihi nke a, ọnụọgụ ụmụ nwanyị na-arụsi ọrụ ike nchụ aja na Europe pere mpe. Onu ogugu di nkenke nke ndi bishop na Europe n’ihi na ndi Europe choro ichoro umunwanyi ndi America na mbido nmeghari ahu ma emesia odi nkpa ichoputa ndi Bishop ndi America.
RCWP-Canada gosipụtara mmalite nke nhọpụta nke onye ụkọchukwu mbụ na Canada na 2005 mgbe a họpụtara Michele Birch-Conery na nso Gananoque, Ontario, Canada na St. Lawrence Seaway. Emechiri onye ụkọchukwu nke abụọ nke Canada, bụ Marie Bouclin na 2007. E chiri Bouclin bishọp na 2011. Ọnụọgụ nke ala Canada emeela ka etiti ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu nọ na Western Canada na etiti ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu na Eastern Canada. Na 2018, Bishop Marie Bouclin lara ezumike nká, na Jane Kryzanowski ka a hoputara Bishop nke RCWP-Canada.
Ndi gọọmentị nke Canada tinyekọtara RCWP-Canada na 2014 dị ka ndị a: Ndị ụkọchukwu Roman Katọlik Roman Katọlik, Femmes prêtres catholiques romaines du Canada. Ndị na-enweghị uru na-eji ndebiri RCWP-Canada maka okwu kwa ụbọchị. Ọchịchị nke RCWP-Canada, dịka nke RCWP-USA, dabere na usoro okirikiri. Ọdịdị ha gụnyere: otu Board of Directors nonprofit, otu National Leadership Circle na ndị nnọchi anya si Ọwụwa Anyanwụ na Western Canada na bishọp; onye nhazi ihe omume (onye na-ahụ maka ịkwadebe ndị a họpụtara ime echichi na ịbụ ndị ụkọchukwu); na onye nchịkwa, onye na-ahazi ọrụ nke nzukọ a. RCWP-Canada nwere usoro iwu dị iche iche nwere ike ime maka ahụmịhe Canada ma na-arụ ọrụ ugbu a dị ka otu mpaghara na-echebara ọdịiche ọdịbendị echiche. RCWP-Canada na RCWP-USA nwere otu ọhụụ, ebumnuche na ụkpụrụ.
Na October 21, 2010 nke mbụ Southern Region kewara site na RCWP-USA wee hibe Association nke Ndị ụkọchukwu Catholicmụ nwanyị Roman Katọlik (ARCWP). Ọ bụ ezie na ndị inyom na-agagharị na-ekwenyeghị banyere otu esi eme ya na ihe kpatara nkewa nke ARCWP na RCWP-USA, ọtụtụ ga-ekwenye na ọ gụnyere nghọta dị iche iche gbasara agụmakwụkwọ chọrọ maka nhazi, usoro nhazi nke iwu, ọdịiche dị iche iche nke mmadụ na ụdị, yana nkwa na ikpe ziri ezi. ministri ndị metụtara ya. N'agbanyeghị nkewa, ụmụ nwanyị nọ n'òtù abụọ a na-ahụ onwe ha dịka iyi abụọ nke otu ije. ARCWP bụ mkpakọrịta ghọrọ ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ 501 (c) (3). ARCWP nwere usoro iwu yiri nke RCWP-USA, mana ọ dịkwa iche. Dị ka ihe atụ, ARCWP's Vision Statement na-agụ, sị: “Thetù Ndị riestskọchukwu Roman Katọlik Associationtù Ndị Okpukpe na-agbaso ụkpụrụ ọhụrụ nke ozi a họpụtara ahọpụta n'ógbè ndị ha na ndị ya na Chọọchị Roman Katọlik hà nhata.” Nkwupụta RCWP-USA Vision na-agụ "modeldị ọhụrụ nke ozi a họpụtara ahọpụta na Churchka Roman Katọlik ọhụrụ." Ọ bụ ezie na asụsụ nke nkọwapụta onwe dị iche iche dị iche iche na ARCWP na RCWP-USA, ụzọ otu obodo abụọ a si arụ ọrụ dị nnọọ iche.
Dịka ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ, achọrọ ka ARCWP nwee ndị isi nchịkwa. Na ARCWP, ọrụ ndị Board bụ isi ego. A na-ahọpụta ndị isi oche. ARCWP na-eji usoro nkwekọrịta iji mepụta ụkpụrụ nduzi na idozi nsogbu. A na-atụle echiche n'ime kọmitii, wee zigara ndị otu site na nyocha maka ndezi na nyocha ha. Mgbe edere ihe ikpeazụ, a na-ewepụta ya ọzọ ndị otu niile na-eme ntuli aka. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-ekpebi votu ahụ.
E keaghị ARCWP na mpaghara. Ka ọ na-erule oge opupu ihe ubi nke 2020, ARCWP nwere ihe dịka ndị otu 90. Ndi mmadu ato, ndi mmadu ato, ndi hoputara ndi otu ndi na-aru oru na-aru oru na ndi komiti. Uzo ahu gunyere onye ochichi, onye isi na onye ndumodu. Nke ọ bụla na-eje ozi afọ isii, afọ abụọ na nke ọ bụla. N'ụzọ nke a, a na-echekwa n'ihu. Otu Onye Nchịkọta Ihe Nlekọta Ihe Omume ahụ, nke atọ na nke ahọpụtara, na-ejikwa ihe ndị chọrọ maka ndị na-achọ akwụkwọ, ndị ga-aga ime, na ndị echichi. Onye ọ bụla so na ARCWP nwere ike were usoro ihe omume nke otu Onye Nchịkọ Ọrụ Mmemme haziri. Otu onye otu ọ bụla nwere ike ịkọwa kọmitii ma kpọọ ndị otu ọzọ ka ha sonyere, yana ọkwa nye ndị otu Onye Isi Circle.
Fọdụ ndị otu ma ARCWP na RCWP-USA na-ahụ ụbọchị mgbe eleghị anya obodo abụọ a ga-abụ otu. Ọtụtụ ndị otu n'ime ha abụọ enweworị ịdị n'otu n'ọhụụ, ebumnuche na ụkpụrụ.
N’ọnwa Eprel 2020, e nwere ndị bishọp iri na iteghete na nzukọ ụkọchukwu Nwanyị Roman Katọlik zuru ụwa ọnụ; Ndị ụkọchukwu 197 (na mgbakwunye na ndị ụkọchukwu iri na isii nwụrụ anwụ); diakonom iri-na-iteghete; na mmadụ iri na asatọ na-achọ ime echichi dikacenti.
Mmegide nke onka Roman Katọlik ndị Katọlik na nhọpụta ụmụ nwanyị bụ nnukwu ihe ịma aka nye usoro RCWP n'ihi ọdịnala ya na nke nna ochie, misogyny pụta ụwa, yana ikike na uru ndị ụkọchukwu na-enwe. Agbanyeghị na ọtụtụ ndị ụkọchukwu Roman Katọlik na-akwado ịkwado ụmụ nwanyị ịbụ ndị ụkọchukwu, mmadụ ole na ole na-ekwupụta nke a n'ihu ọha n'ihi usoro ntaramahụhụ nke ndị isi ụka Roman Katọlik. A chụọla ndị mere nke a ma mebie aha ha. N’ihi ya, ndị Roman Katọlik, ndị na-efe ofufe na parish nke ndị ụkọchukwu na-akwado nkwado ụmụ nwanyị, adịkarịghị ama na ụkọchukwu ha ma ọ bụ ụkọchukwu ha na-akwado nhọpụta nke ụmụ nwanyị. Otutu, otutu ndi uka Roman Katolik bu ndi eyi egwu ma na emegide mmeghe.
Agbanyeghi na nyocha nke obodo gosiri na ihe dika ụzọ abụọ n’ime ụzọ atọ nke Roman Katọlik niile dị na United States na-akwado nkwado ụmụ nwanyị (ọnụ ọgụgụ ka ukwuu) ndị na-ekpe Katọlik na-ahụkarị ndị ụka ha n’anya ma na-aga n’ihu na-akwado ụlọ ụka ahụ n’agbanyeghi na ọ katọrọ usoro ụmụ nwanyị (na nkuzi ndị ọzọ) nke ha na-ekwenyeghi). Ndị Katọlik Lay enweghị olu ha na ndị isi ụka Roman Katọlik. Ndị niile na-eme mkpebi na Roman Katọlik bụ ụmụ nwoke e chiri echichi: pope, kadinal, bishọp, ndị ụkọchukwu, na ndị dikọn. Nhọrọ ndị emegheere ndị Katọlik hụrụ ụka n'anya, mana ha ekwenyeghị na ya, amachi.
Ihe ịma aka ndị ọzọ maka RCWP gụnyere: ịmata otu usoro RCWP ga-esi pụta n'ọdịnihu; afọ nke ndị òtù mbụ (ndị na-eto eto na-abata na RCWP ma ọ bụghị dị ka ọtụtụ ma ọ bụ ngwa ngwa dị ka ha chọrọ); oké ike ọgwụgwụ na ọrụ afọ ofufo niile; ike ego; na-ahọpụta ndị ụkọchukwu gụrụ akwụkwọ; inye aka mee ka echichi nke ndi nwanyi nye ndi pere mpe na ndi pere mpe nke akụ na ụba ebe enyere ego nke usoro mmụta okpukpe ma ọ bụ nke Chukwu; na iguzogide ndị ụkọchukwu.
Chọọchị Roman Katọlik bụ ụlọ ọrụ si n'ọtụtụ mba zuru ụwa ọnụ nke dịrị kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ abụọ. Ọ bụkwa ụlọ ọrụ nke doro anya (na nkà mmụta okpukpe ya na usoro ya) na-eme ka ụmụ nwanyị Roman Katọlik bụrụ ụmụ amaala nke abụọ. Naanị ndị a họpụtara ahọpụta nwere ike isonye na mkpebi, Canon 1024 na-edebekwa iwu maka ụmụ nwoke naanị (Usoro nke Iwu Canon 2016). Womenmụ nwanyị enweghị ikike ime mkpebi ma ọ bụ ọrụ na Roman Katọlik na ọkwa ya kachasị elu, agbanyeghị na ọkwa mpaghara ha nwere ike ịbụ ndị nchịkwa parish, ma ọ bụ, n'ihe gbasara ụfọdụ iwu okpukpe, ha nwere ike ịrụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, na ọrụ ebere. Ikike ọ bụla nwanyị na-eme n’ogo dị na parish Roman Katọlik na-adabere kpamkpam n’ịchọ ezi uche na mmeghe nke ụkọchukwu ma ọ bụ bishọp obodo, onye ikike ya nọ n’okpuru bishọp na / ma ọ bụ nlekọta Vatican. Dị ka National Catholic Reporter, enwere ndị Katọlik 1,280,000,000 na-eme atụmatụ gburugburu ụwa (Osisi 2017). Ọ bụrụ na ọkara bụ ụmụ nwanyị, mgbe ahụ, ihe karịrị ụmụ nwanyị 500,000,000 gburugburu ụwa n'okpuru ụmụ amaala nke abụọ na Chọọchị. Ọtụtụ mgbe, ọnọdụ ha na Chọọchị Katọlik na-abụ ntọala maka ọnọdụ amachibidoro ụmụ nwanyị nọ na ọha na ọdịbendị sara mbara. Nke a bụ eziokwu karịsịa ebe Chọọchị Roman Katọlik na-egosipụta oke ọdịbendị, dịka ọmụmaatụ, na ụfọdụ mba ndịda America.
Ọ bụrụ na Catholicka Roman Katọlik ga-ekwenye nhatanha ụmụ nwanyị nọ na Churchka, nkwupụta a ga-agbanwe ọ bụghị naanị ọrụ ụmụ nwanyị n'ime Churchka, kama ọ bụ ọrụ ụmụ nwanyị na mpaghara ọhaneze nke Churchka na-arụ ọrụ. Mgbanwe a dị egwu site n'ime ga-enyere ndị nwanyị aka ịtọhapụ n'ihi na ime onwe ya na si mmegbu nke na-esite na ọkwa nke abụọ, gụnyere mmetụta uche, nke anụ ahụ, na nke mmegbu n'ime na n'èzí nke ezinụlọ ha. Ọnụnọ nke ụmụ nwanyị n'etiti ndị ụkọchukwu Roman Katọlik nwere ike inyere aka igbochi mmetọ ụmụaka na ndị na-abụghị ndị okenye na ndị nwoke na ndị ụkọchukwu.
Dị ka ụlọ ọrụ kacha ochie nke Iso Christianityzọ Kraịst, Chọọchị Roman Katọlik na-agbanwe agbanwe na nkà mmụta okpukpe na omume ya. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ a dị ike, nke na-achọghị mgbanwe kwupụtara nhatanha ụmụ nwanyị, a ga-agbanwekwa ọnọdụ ụmụ nwanyị nọ n'ọgbakọ ụka ndị ọzọ na-achọghị mgbanwe.
Na nkenke, kedụ ka okpukperechi n ’ụwa a ga - adị ma ọ bụrụ na aghọtara ụmụ nwanyị ka ha tozuo oke nwoke n’obodo na ụlọ ọrụ okpukpe niile? 'Stù ndi otu nchụ aja Roman Katọlik na-agba Vatican aka bụ otu ụzọ na mgbanwe a. N'oge a, ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu na ndị bishọp na-arụ ọrụ a bụ ọhụụ ọhụụ nke ozi ọma maka Chọọchị Roman Katọlik na usoro ya na omume ya mgbe ha na-ejigide ndị Katọlik.
Foto # 1: Ndị Bishọp US niile na RCWP-USA, gụnyere ndị bishọp abụọ lara ezumike nká, dị na Santa Cruz, Ọktoba 1, 2017, maka ọgbakọ ndị bishọp nke Suzanne Thiel na Jane Via. Ndị bishọp ARCWP atọ bịakwara, otu bishọp Canada, na otu bishọp si Germany. (Azụ azụ, L ka R) Christine Mayr-Lumetzberger (Germany), Mary Eileen Collingwood (ARCWP), Michele Birch-Conery (ARCWP), Nancy Meyer (US, Midwest Region), Andrea Johnson (US, Eastern Region). (Ahịrị nke abụọ, L to R) Jane Via (US, Western Region), Joan Hoak (US, Great Waters Region), Bridget Mary Meehen (ARCWP), Sybil Dana Reynolds (US anaghị arụ ọrụ), Suzanne Thiel (US, Western Region) , Bishop Marie Bouclin (lara ezumike nká), na Bishop Olivia Doko (US, Western Region). (N'ihu ihu) Regina Nicolosi.
Foto # 2: Nhọpụta ndị nchụ aja nke Danube asaa, June 29, 2002: (R ruo L): Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner, Dagmar Celeste, Adelinde Roitlinger, Gisela Forster, na Christine Mayr-Lumetzberger.
Foto # 3: Bishop Patricia Fresen (South Africa / Germany) na-agbatị aka na emume emume.
Foto # 4: Iwu Diaconate, Osimiri Danube, June 26, 2004. A ga-ahọpụta ụmụ nwanyị (gbuo ikpere n'ala ruo R): Jane Via (aka Jillian Farley), Victoria Rue, Monika Wyss, Genevieve Beney, Astrid Indricane, na Michele Birch- Conery.
Foto # 5: Ememe Oriri Nsọ na Pittsburgh Ordination na ụgbọ mmiri, July 31, 2006. Ndị Bishọp Ida Raming (L), Patricia Fresen (C), na Gisela Foster (R) na-acha odo odo. New dikọn na-eyi acha anụnụ anụnụ, ebe ndị nchụàjà ọhụrụ na-eyi uhie uhie. Ihe osise ndị a na-ese, mana aha abụghị n’usoro ha dị. Ndị dikọn: Cheryl Bristol, Juanita Cordero, Mary Ellen Robertson, na Janice Sevre-Duszynska. Ndị ụkọchukwu: Eileen McCafferty DiFranco, Merlene Olivia Doko, Joan Clark Houk, Kathleen Strack Kunster, Bridget Mary Meehan, Roberta Meehan, Sybil Dana Reynolds, na Kathy Sullivan Vandenberg.
Foto # 6: Nchịkọta na ọkwa dị na Santa Cruz, California na Ọktọba 1, 2017. Onye isi oche-Onye Isi Bishop Olivia Doko (etiti), yana ordinands Suzanne Thiel (L) na Jane Via (R).
Image # 7: Iwu nke Kathryn June Rolenc na diaconate, nke Bishop Joan Houk, Great Waters Region, May 30, 2015. (Ahịrị azụ, L ka R), Elsie McGrath, Susan Mielke, Mary Foley, Ann Klonowski, Mary Grace Crowley-Koch. (N'ahịrị nke mbụ, L ruo R) Dagmar Celeste, Joan Houk, Kathryn June Rolenc, Barbara Zeman, Paula Hoeffer, Lill Lewis.
Bonavoglia, Angela. 2001. “Happybọchị Obi Happytọ, Mgbe A Na-ahọpụta Nwanyị.” Chicago Tribune, December 5. Nweta site na https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2001-12-05-0112050020-story.html na 20 May 2020.
Usoro nke iwu Canon. 2016. "Ndị A Ga-ahọpụta." Nweta site na http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/eng/documents/cic_lib4-cann998-1165_en.html#THOSE_TO_BE_ORDAINED na 20 May 2020.
Cordero, Juanita, na Suzanne Avison Thiel. 2014. Lee M, A Dị M Njikere: Modeldị Nlereanya Ọhụrụ nke Ozi Echichi. Portland, OR: Ndị ụkọchukwu Catholicmụ nwanyị Roman Katọlik.
"Iwu nke Nwepụ." 2002. Ọgbakọ maka Ozizi Okwukwe. August 5. Nweta site na http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20020805_decreto-scomunica_en.html na 20 May 2020.
Fresen, Patricia. 2019. Nkwukọrịta email na onye edemede. August 23. (A natara ụfọdụ ozi sitere na Patricia Fresen na mkparịta ụka onwe onye na afọ ndị gara aga. Email nke August 23 gosipụtara akụkụ dị mkpa nke ozi ahụ.)
John Paul II, Pope. 1994. Ordinatio sacerdotalis (On Reserving Priestly Ordination to Men Naan), May 22. Nweta site na http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html na 20 May 2020.
Mayr-Lumetzberger, Christine. 2018. Mkparịta ụka onwe onye na onye edemede. Santa Cruz, California.
Mayr-Lumetzberger, Christine. 2019. Mkparịta ụka onwe onye na onye edemede. Boston, Massachusetts.
Newman, Andy. 2019. “A Chọpụtagoro Prikọchukwu Na-ekwenyeghị.” New York Times, February 25. Nkebi nke B: 56.
Ndi Katoliki Ndi Nwanyi Roman Katolik. nd “History of the International Roman Catholic Womenpriest Movement.” Nweta site na https://www.romancatholicwomenpriests.org/history/ na 29 August 2019.
Ndi Katoliki Nwanyi Katoliki 2007. "Iwu." February 3. Akwụkwọ dị n'ime.
Swimme, Brian Thomas, na Mary Evelyn Tucker. 2011. Njem Eluigwe na Ala. New Haven, CT: Mahadum Yale University.
Osisi, Cindy. 2017. “Global Catholic Population dị elu ijeri 1.28; Ọkara dị na Mba iri. ” National Catholic Reporter, April 8. Nweta site na https://www.ncronline.org/news/world/global-catholic-population-tops-128-billion-half-are-10-countries na 20 May 2020.
Nzukọ Ndị Isi Nwanyi. nd “Gbasara Anyị.” Nweta site na https://www.womensordination.org/about-us/ na 29 August 2019.
Dinmụ nwanyị Iwu Mba Nile (WOW). nd “Gbasara Anyị.” Nweta site na http://womensordinationcampaign.org/ na 1 March 2020.
Daigler, Mary Jeremy. 2012. Na-ekwekọghị na Nhazi Chineke: A History of Women's Ordination Movement na US Roman Catholic Church. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Doyle, Dennis M., Timothy J. Furry, na Pascal D. Bazzell, ndị ọzọ. 2012. Ecclesiology na Mwepu: Bokè nke ịbụ na ịbụ ndị bi na Post Oge a. Maryknoll, NY: Orbis Books.
Nkeji, Deborah. 2004. Papal “Mba”: Ntuziaka zuru oke maka ngha ọnụ nke Vatican na-eleghara iwu ndị nwanyị anya. New York: Okporo ụzọ.
Macy, Gary. 2008. Akụkọ Zoro ezo nke Iwu Women'smụ nwanyị: Ndị ụkọchukwu Nwanyị na Medieval West. New York: Oxford University Press.
Peterfeso, Jill. 2020. Nwanyị nwanyị: Omenala na mmebi iwu na Chọọchị Roman Katọlik nke Contemporary. New York: hamlọ ọrụ University Press nke Fordham.
Ogba, Ida. 1976, 1977. Mwepu nke ụmụ nwanyị na ọkwa nchụ aja: Iwu Chukwu ma ọ bụ ịkpa oke nwoke? Tụgharị site na 1973 German mbipụta site NR Adams. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1976, na Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1977.